မြို့ရွှေမန်းကသတင်းစကား အပိုင်း(၃) လာဘ်စားသော မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မြို့ရွှေမန်းကသတင်းစကား အပိုင်း(၃) လာဘ်စားသော မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့်
မြို့ရွှေမန်းကသတင်းစကား အပိုင်း(၃) လာဘ်စားသော မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့်
Posted by JUDGEMENT on Mar 7, 2012 in Creative Writing, Myanma News, Myanmar Gazette, News | 21 comments
Judgement အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ ချဲထွက်မဲ့နေ့မှာ ချဲကိုတရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရနေတဲ့
ဒိုင်တွေအကြောင်းကို Mandalay Gazette မှာဖွင့်ချခဲ့ပေမဲ့ ဘယ်ရဲမှဖမ်းတာမတွေ့ရပဲနဲ့
ဒါဟာ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်လာဘ်စားတယ်ဆိုတာဟာ တနိုင်ငံလုံးသိ
အောင်ကြေညာလိုက်တာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြို့တော်ဝန် ဦးဖုန်းဇော်ဟန် လာဘ်စားတာကိုလည်း ပိုပြီးတော့မှ လာဘ်ယူလို့ကောင်းတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးနေရာကိုပို့
လိုက်ပါတယ်။ဦးရဲမြင့် ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာ သူပဲသိပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ့နေက ချဲဒိုင်တွေစာရင်းနဲ့ အမှတ်(၆)စခန်းမှူး နဲ့အဖွဲ့ လာဘ်ယူတဲ့ ဓါတ်ပုံ ၊ အမှတ်(၈) စခန်းမှူးနဲ့ အဖွဲ့ လာဘ်ယူတဲ့ပုံတွေကို တင်ပြပေးခဲ့တဲ့အပြင် သက်ဆိုင်ရာ ရဲမှူးကြီး
ရဲ့ လာဘ်ယူပုံကိုဝန်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့်ဆီကိုတရားဝင် စာပို့ တင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။အရေးလဲမယူခဲ့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဦးရဲမြင့်အနေနဲ့ လာမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြုတ်ဖို့သေချာနေပါပြီ။
NLD နဲ့ပြိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုရင်တော့ ပြည်သူ့ရွေးချယ်ခံ ဘ၀ကို ဦးရဲမြင့်လုံးဝမရ
ဦးရဲ့မြင့်အနေနဲ့ လာဘ်ယူတဲ့ ရဲမှူးတွေ ၊ စခန်းမှူးတွေကိုအရေးမယူခဲ့တာဟာ ပြည်သူတွေကို လောင်းကစားနွံထဲနစ်နေစေချင်တာပါ။ဘောလုံး ၊ နှစ်လုံးထီ နဲ့ ချဲ ကိုအရေး
မယူသရွေ့ ဦးရဲမြင့်ဟာ လုံးဝ လာဘ်ယူသော (နန်းတွင်းထဲချဲဒိုင်တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားသော) ၊တစ်မြို့ လုံးကို တရားဝင်လောင်းကစားလုပ်ခွင့်ပေးထားသော
ပြည်သူတွေမွဲလေ ၊ ကြံ့ဖွတ်တွေကြိုက်လေပေါ့။ဒီတော့ ဒီတစ်ခါ Judgement အနေ
နဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ထံကိုလိပ်မူပြီး ဦးရဲမြင့် ညံ့ဖျင်းပုံနဲ့တကွ ချဲဒိုင်တွေရဲ့
လုပ်ပုံ ကိုင်ပုံတွေကို ဖွင့်ချပြီး စာတင်တော့မယ်ဆိုတာကို Mandalay Gazette မိသားစုဝင်တွေဆီကိုအကြောင်းကြားတာပါ။
တရားမ၀င်တဲ့ လောင်းကစားပပျောက်ပြီး သာသနာတော်ကို သန့်ရှင်းစေချင်တဲ့
စေတနာသန့်သန့်နဲ့ပါ။Mandalay Gazette ၀င်တွေထောက်ခံပေးကြပါလို့။
R ဇာနည်လိုပြောရရင်တော့ Mandalay Gazette ၀င်တွေရေ – – – –
လောင်းကစား ပပျောက်ရေး + သာသနာတော် သန့်ရှင်းရေး အတွက်ပါ။
မမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုမှန်ကန်တယ်လို့မပြောပါနဲ့ မတရားတဲ့ကိစ္စကိုတရားတယ်လို့မပြောပါနဲ့။ မတရားတဲ့ကိစ္စကို တရားတယ်လို့မပြောပါနဲ့ အဲဒါနဲ့စပါ။ နောက်တစ်ဆင့်ကျမှ မှန်တဲ့ကိစ္စကို မှန်တယ်လို့ပြောရမယ်။ မှားတဲ့ကိစ္စကို မှားတယ်လို့ပြောရမယ်။ ပထမဦးဆုံးအဆင့်ဟာ သိပ်အမြင့်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်။ စပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဖို့လိုတယ်။ မမှန်တာကို မှန်တယ်လို့မပြောပါနဲ့။ မတရားတာကို တရားတယ်လို့မပြောပါနဲ့။ ဒုတိယအဆင့်ကျရင်တော့ မမှန်တာကို မမှန်ဘူးပြောပြီးတော့ မှန်တာကို မှန်တယ်လို့ထောက်ခံရဲရမယ်။ အဆင့်ဆင့်တက်သွားရမယ်။
အောင်ဆန်းစုကြည် (ဟဲဟိုးမိန့်ခွန်း မှ)
ကျုပ်က ကိုယ်တိုင်သာ မပြောရဲတာ
သူများပြောတာတော့ မြှောက်ပေးရဲ အဲလေ အားပေးရဲပါတယ်…
အဲဒါမျိုးတွေ အချက်အလက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ အများကြီးပေါ်ထွက်လာစေချင်မိတယ်။
တကယ်ထိထိရောက်ရောက် ဖေါ်ထုတ်ကြသူတွေက နဲနေသေးတယ်။
၀န်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် အရေးမယူရဲတဲ့ ကိစ္စကို သမ္မတကြီးထံတင်ပြတဲ့အခါမှာ Result ဘယ်လိုထွက်လာနိုင်သလဲ ? ဒါကိုကြည့်ရမှာပါ။
လောင်းကစားပပျောက်အောင် ဘာလို့မလုပ်ကြသလဲ ။
ရှင်းပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ရနေလို့ပါ။မြင်းခြံနယ် ။ ပခုက္ကူနယ်ကလွှတ်တော်အမတ်တွေ
လောင်းကစားကို ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ပေးနေတာ ဘယ်သူတွေသိကြသလဲ။
ရွှေဘိုလဲအတူတူပါပဲ။မြို့မိ ၊ မြို့ဖ ဆိုသူတွေဟာ လောင်းကစားဒိုင်တွေကြည့်ပါပဲ။
ဘယ်လောက်ရင်နာစရာကောင်းသလဲ ။ကလေကချေ တွေလောင်းကစားဒိုင်လုပ်
မြို့ ရွှေမန်းမှာရော တနိုင်ငံလုံအတူတူပါဘဲဗျာ။စိတ်ကုန်တယ်။
ဘယ်လို သတ္တဝါတွေလဲ မသိပါဘူး။ပြည်သူတွေလဲ မွဲလို့ မဆုံး
ဒါတွေကို မြင်နေ၊ကြားနေ သိနေပေမယ့် ဘယ်သူမှ အရေးတယူမရှိခဲ့ဘူး.. အရေးယူခဲ့ရင်လည်းခဏပဲ ပြီးရင် ပြန်ပြန်ပေါ်လာတယ်.. အမြစ်ပြတ်အောင်မလုပ်ကြဘူး၊
ဘုန်ကြီးကျောင်းတွေထဲမှာဖွင့်ကြတယ် ၊ ရပ်ကွက်ထဲလည်း ရှိတုန်းပဲ ၊
နေ့ခင်း 12 နှစ်လုံးထီထွက်ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင် ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ ဆူညံနေတုန်းပဲ
1-2-3အလုံးစုံပပျောက်ရေး ၊ အဂတိလိုက်စားမှု ပပျောက်ရေး…
ဒါတွေရှိနေသရွှေ့လည်း ဆင်းရဲတွင်းနက်နေဦးမှာပဲ ။
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးကိုပဲ အားကိုးရမှာပဲ…
1.2.3 ဒိုင်များ (လောင်းကစားဒိုင်များ) ကို “ဒိုင်”လို့နာမည်လေးထားလိုက်ပါတော့
၁-သူများအသက်သတ်ခြင်း (ပါဠိ လိုရေးရင်မှားမှာစိုးလို့ ရိုးရိုးဘဲရေးတာပါ)
ဒိုင် ကဘယ်သူအသက်မှမသတ်ဘဲ သူ့အလုပ်သူလုပ်လို့ရပါတယ်
စားသောက်ဆိုင် ကစ ငါးမွေးကန် ကြက် ၀က်မွေးမြူရေး အဆုံး ရေချိုပုဇွန် အကြီးအကျယ်လုပ်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ လွတ်နှိင်ပါ့မလား?????
ဒိုင် က ဘယ်သူ့သားမယားမှမစော်ကားဘဲ သူ့အလုပ်သူလုပ်လို့ ရပါတယ်
ကျန်တဲ့စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များလဲ စောင့်ထိန်းမယ်ဆို ကင်းအောင်နေလို့ရပါတယ်
KTV ဟိုတယ် စင်တင် စတာတွေကတော့ ကိုယ်တိုင်မီးမလောင် မီးလောင်ခြင်းကိုအားပေး တဲ့သဘောတော့ရောက်တာပေါ့ (အောက်စီဂျင်)
ဒိုင် က အမှန်အတိုင်းဘဲပြော မုသားလုံးဝမပါဘဲလုပ်လို့ရပါတယ် (56 ထွက်တာကို 78 ထွက်ပါတယ် မန်ယူ 3: 1 နှိင်တာကို 1:1 ပါလို့ လိမ်လို့မရပါဘူး ရှံးရင် ပေးလိုက် နှိင်ရင်ယူလိုက် ထွက်မပြေးနဲ့ )
ဒိုင်ပြေးတာထက် ထိုးသားပြေးတာက % ပိုများပါတယ်
အခြားစီးပွါးရေးသမားများ မုသားမပါဘဲ ရပ်တည်ဖို့မလွယ်ပါဘူး (မကောင်းလဲ ကောင်းတယ် ပြောရောင်းရမှာဘဲ …မလှလဲ လှတယ်ပြောရောင်းရမှာဘဲ…အမှန်အတိုင်းချည်းပြောလို့ကတော့ စီးပွါးပျက်မပေါ့)
အမြတ်ခွန်ဌာန ကိုလဲ လိမ်ပြောမှ အမှန်တွေပြောရင် အခွန်တွေပိုပေးရမပေါ့
ဒိုင် က ဘယ်သူ့ပစ္စည်းမှမခိုးဘဲ သူ့အလုပ်သူလုပ်လို့ရပါတယ်
ဈေးအရောင်းအ၀ယ်မှာ အလေးခိုးခြင်း အရေမတွက်ခိုးခြင်းကင်းအောင်လုပ်လို့ရပါ့မလား (ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံက စီးပွါးရေးသမားများအသိ)
ဒိုင် က အရက်သေစာမပါလဲ သူ့အလုပ်သူလုပ်လို့ရပါတယ်
အခြားစီးပွါးရေး များလဲကင်းအောင်နေမယ်ဆိုရင် ရပါတယ်
စားသောက်ဆိုင် Grand Royal လိုမျိုးကတော့ အောက်စီဂျင်ပေါ့
ဆိုတော့ ….ဒိုင် တွေဟာ ထိုးသားတွေကို တစ်အိမ်တစ်ယောက်မထိုးမနေရ ထိုးရင်လမ်းခင်းပေးမယ် ဂရံပေးမယ်လို့လဲ လုံးဝ မစည်းရုံးပါဘူး သူလဲသူ့စီးပွါးသူလုပ်တာပါဘဲ
ဒိုင် လုပ်လို့သေချာပေါက် သူဌေးဖြစ်ကြေးဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့လိုက်မလုပ်နှိုင်တာပါလိမ့် လောင်းကစားတယ်ဆိုတာလဲ သိပ်တော့မလွယ်လှဘူးထင်ပါတယ်
တခုဘဲပြောစရာရှိတယ် ဒိုင် ဟာမြန်မာနှိင်ငံမှာ ဥပဒေနဲ့မလွှတ်ကင်းလို့ ရာဇ၀တ်မူမြောက်ပါတယ်
ဒါ့ကြောင့် ရဲတွေကို ပေါင်းပြီးလုပ်နေရတဲ့ အတွက် လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမူမြောက်ပါတယ်
(ဆဲ ရင်လဲ ဖြည်းဖြည်းလေးဆဲကြပါနော်)
အပေါ်က comment လေးနဲနဲလောက်ဆက်ပါရစေနော်…
ဒိုင်က ရဲကိုလာဘ်ပေးတာကသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပါ သူကဘယ်သူ့လစာမှစားသူမဟုတ်လို့ သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့် သူ့မှာရှိပါတယ်
လာဘ်စားပြီး မိအောင်မဖမ်းတာကတော့ ရဲအလုပ်ပါ ရဲ ဆိုတာကနှိင်ငံတော်လခစားမို့လို့ အပြစ်ရှိပါတယ်
ရဲတွေကလဲ မဖမ်းဘူးဆိုတာ သူတို့ရဲ့ စားဝတ်နေရေးရပ်တည်မူ ၇၀% လောက်က ဒိုင်တွေပေါ်ကျရောက်နေပါတယ်..ထားပါတော့ ဒါကသူ့ကိစ္စ..
လူအချို့က လောင်းကစားသမားတွေကိုတော်တော် အထင်သေးပါတယ်..
“လုပ်နှိင်မှာပေါ့ သူက အဲဒါလုပ်တာကိုး”
“လူနှိင်မှာပေါ့ သူ့ယောက်ကျားက2,3သမားလေ”
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘုရားမှာ ဒိုင်က များများလူလို့ သူ့ကိုဘုရားလူကြီးခန့်တာ သာသနာညစ်နွမ်းတယ်ဆိုရင် ဒိုင်တွေဆီက မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှ အလူမခံရ ဘယ်ဒိုင်မှ ဘုရားလူကြီးမလုပ်ရလို့ သတ်မှတ်သင့်ပါတယ် ငါးပါးသီလ မလွတ်သော စီးပွါးရေးသမားများကိုသာ လူကြီးခန့်လိုက်ပေါ့
တကယ်တော့ ဒိုင် တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ဟာလဲ ထင်သလိုမလွယ်လှပါဘူး အားလုံးကို ဒိုင်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်…သူ့ကိုအထင်သေးသူများအတွက်ပါ..လောင်းကစားဆိုတာ မကောင်းဘူးဆိုပေမယ့် ဒါကမြန်မာနှိင်ငံဥပဒေနဲ့မို့လို့ပါ တခြားနှိင်ငံတွေက ကာစီနိူကြီးတွေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မတုံး….
ဆိုတော့….အထင်ကြီးပါလို့တော့မပြောပါဘူး ဒါပေမယ့် ဒိုင် ရှိလို့ သာသနာ မသန့်ဘူးဆိုတာတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး …ဖမ်းချင်ရင်ဖမ်းလိုက် အထင်တော့ မစမောနဲ့ ဆိုတဲ့သဘောလေးပါ..
“””တရားမ၀င်တဲ့ လောင်းကစားပပျောက်ပြီး သာသနာတော်ကို သန့်ရှင်းစေချင်တဲ့
ဒါကြောင့် ငါးပါးသီလ လုံခြုံနှိင်သော တရားမ၀င် လောင်းကစား နဲ့ သာသနာတော် သန့်ရှင်းရေး သိပ်တော့မပါတ်သတ်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်
လာဘ်စားသော ရဲ များကိုသာအပြစ်တင်လိုက်ပါတော့…..
“””တို့ကတော့…တို့ကတော့……တို့ကတော့ ဖုရားကျောင်းထဲ ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်……မင်းကတော့????”””””
ဗဒင် သီချင်းလေး သတိရမိလို့ပါဗျာ……………
win htethlaing says:
all of you should not say whether it is true or not
if you get this position , you may do like this, ok
အမြင်မတူတာချင်းဆဲနေကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်တဲ့
ဆိုလိုတာက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအခြေစိုက် ချဲဒိုင်တွေကြောင့်
တကယ်ကို လူလိုပဲနေချင်ရင် သင်္ကန်းဝတ်မနေကြပါနဲ့။
သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ ချဲရောင်း ၊ အရက်သောက်တာတွေကိုပြောတာပါ။
ဒီလိုတွေကြောင့် မွတ်စလင်တွေ ၊ ခရစ်ယာန်တွေကြားမှာ
နောက်ပြီး အခြားနိုင်ငံတွေမှာ Casino ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့
ချဲဟာတရားဝင်မဟုတ်တဲ့အပြင် ပေါက်ရင် အဆလျှော့ရတာနဲ့
ထွက်ပြေးတာနဲ့ ဒါတွေကြောင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှု့ပိုလာတာပါ။
ဒါတွေကိုအရေးမယူတဲ့အပြင် ခိုးဆိုးနှိုက်တွေပိုပေါ လာတာလဲအသိပါ။
ဒါတွေကြောင့် သာသနာတော်နဲ့မကိုက်ညီရင် လူထွက်ခိုင်း
လောင်းကစားလုပ်ချင်ရင် လူထွက်။ဒိုင်တွေကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူ
JUDGEMENT ပြောခဲ့တဲ့ ၀၂ – ၃၄၁၅၀ တို့ ၀န်ကြီးချုပ်ဆီတင်ပြတဲ့
ဘုန်းကြီးကျောင်း စာရင်းတွေ ၊ ဒိုင်တွေကို ဘယ်သူအရေးယူသလဲ။
ထီးလင်းဗျာ ၊ ပုဂံတိုက်ဗျာ။ နောက်ပြီး ဂွေးချိုဗျာ။ဘုရားကြီးတိုက်ဗျာ။
ဒီတော့ ချဲထိုးချင်ရင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေထဲသွားလို့ပြောနေရပါပြီ။
ဒါဟာ သာသနာတော်ကို ထိခိုက်လာတဲ့အနေအထားပါ။ငွေရရင်ပြီးရောဖြစ်
စာတိုက်ကနေ ၀န်ကြီးချုပ်ဆီတင်တာကို ဖြတ်ယူတယ်လို့လဲကြားနေပါတယ်။
ရဲမှူးတွေရဲ့ အမိန်နဲ့ တိုင်စာကို စစ်ဆေးပြီး သူတို့နဲ့မှလွတ်မှ တင်ပေးတယ်လဲ
ချဲဒိုင်တွေကို အရေးယူသင့်တယ်လို့ပြောတာပါ။လုပ်ချင်ရင်ဗျာ အပြင်ထွက်လုပ်ပေါ့။
သာသနာကိုခုတုံးမလုပ်စေချင်တာဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ကောင်း တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ။
Mandalay Gazette ၀င်တွေဆီကို ဖြန့်ပေးပါ့မယ်။
E-mail လေးတွေ ဒီ Post အောက်မှာလာ မန့်ပေးထားပါနော်။တင်လို့ရနိုင်ရင်လည်း
နောက်ပြီးတော့ တရုတ်လူမျိုး ဦးကျော်ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒိုင်အကြီးစားပါ။ ချဲထွက်မဲ့နေ့ဆို
အားလုံးက သူ့ဆီကို တင်ရတာလို့သိရပါတယ်။ဘောလုံး ၊ ချဲ နှစ်လုံး အကုန်ကိုင်တာပါ။
ရဲတိုင်းသိနေတဲ့ အကြီးစားချဲဒိုင်ပါ။နောက်ပြီး အချို့ဆို နယ်စပ်ဒိုင်တွေအထိ အဆက်အသွယ်ရှိပြီး
ဒါတွေကို ဘာကြောင့်အရေးမယူသလဲ ဖြေကြပါ။အမှတ်(၆) ၊ အမှတ်(၈) နဲ့ အမှတ်(၉)
မိတ်ဆွေချဲထိုးချင်ရင် မမေ့နဲ့နော် ။ JUDGEMENT ဆီမှာ ဖုန်းနံပါတ်တွေ အကုန်နီးပါးရှိပါတယ်။
အမြင်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါ။ JUDGEMENT မှန် – မမှန်ကိုပါ။
မှန်ရင် သာဓုနှစ်ကြိမ်ပဲခေါ်ပါရန် ။
( တစ်ကြိမ်ကိုရဲဖမ်းပြီးမှခေါ်ပါရန် )
ကိုသန်းထွဋ်ဦး ၊ ဖရဲ ၊ ဦးဦးပါလေရာတို့ရော ငပွကြီး အပါအ၀င် မန့်သူအားလုံးကို
အခြေခံလူတန်စားများအများဆုံးသာ စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေသဖြင့် မျော်လင့်ချက်များစွာဖြင့်သာ ချဲထိုးနေကြသည်ဟုထင်မြင်မိပါသည်။ ပညာနည်းသော အခြေခံလူတန်းစားများ၏ ချွေနည်းစာလေးများကို အဆီညှစ်ထုတ်ယူနေသည်ဟုထင်မြင်မိပါသည်။ ထို့ကြောင့်၅ ပါးသီလနှင့်မညှိသော်လည်း ဒိုင်များအနေဖြင့် ဆင်ခြင်ပေးစေလိုပါသည်။နေ့စဉ် ၊အပါတ်စဉ် စသည်ဖြင့်ရှိသည်ဟုသိရပါသည်။ ဦးပွ ပြောသော
၁။စားသောက်ဆိုင် ကစ ငါးမွေးကန် ကြက် ၀က်မွေးမြူရေး အဆုံး ရေချိုပုဇွန် အကြီးအကျယ်လုပ်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ
စသည်တို့သည် အခြေခံလူတန်းစားများနှင့်တ်ိုက်ရိုက်မပါတ်သက်ဟုထင်မြင်မိပါသည်။ ဦးပေါက်ရှင့် မှားရင်ခွင်လွတ်ပေးပါရှင့် ဈေးထဲအရပ်ထဲသွားလျှင် အမြဲံမြင်တွေ့ကြားနေရသည်မှာ ဒီနေ့ဘာထွက်လဲ ဘာထိပ်စည်းလဲ ဘာပတ်လဲ။ အမရယ်နောက်နေ့မှအတ်ိုးနဲ့ပေါင်းပေးပါ့မယ်ဆိုတဲ့ နေ့ပြန်တ်ိုးသမားတွေ ၁၀၀ကို၃၀တိုးအထိအတိုးယုပြီးဂုတ်သွေးစုတ်နေတဲ့သူတွေကို တွေ့နေရလို့ comment ပေးမိတာပါ။ ရှည်သွားလို့သူကြီးခွင့်လွတ်ပေးပါရှင်.။ သုတို့ရဲ့နေ့စဉ်ရောင်ရငွေလေးတွေချဲထိုးပစ်ကြတာပါ ။ဆဲရင် ဖြည်းဖြည်းဆဲပါနော်။
လုပ်သာလုပ်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ကော်မရှင်တွေကိုတော့ သိပ်မလုပ်နဲ့ဗျို့။ ဖမ်းခံရရင် သူတို့ ဘဲ ဖမ်းခံရတာ။ ဒိုင်ချုပ် ကြီးတွေ ဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာ မကြားမိသေးဘူး။ အကောင်ကြီးတွေက မဖမ်းဘူး။ အရှိလုိ့ လုပ်စားမှ ဖမ်းခံရတာ။ နတ်ဆိုးလေး ကြားဖူးသလိုပေါ့ နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာပါ ရိုင်းသွားရင် ခွေးလွှတ်ပါ။ မရှိလို့မှ ဖာခံ စားတာ ရဲ က အကြွေး .ိုး သွားလို့ လို့ ပြောရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ မရှိလို့မှ ရောင်းစားပါတယ်ဆို အထက်က အမှုလိုရင် သူတို့လေးတွေ ဖမ်းပြီ။ ဒိုင်ကြီးတွေကျ မဖမ်းရဲ ကြဘူး။
ဟဲ့မောင်ပွကြီး မောင်ရင့်ဘာသာ ဒိုင်ကိုင်တာ တို့ဘာမှ မပြောလိုပါလကွယ်
ဒါပေမယ့် တို့အသက်ရှည်ဆေးလေး KTV တို့ စင်တင်တို့တော့ ထည့်မပြောသင့်ဘူး ငရဲကြီးလိမ့်မယ် ခမျာမှာစားဝတ်နေရေးလေးတွေလုပ်နေတာ သနားစရာ ပြောရင်းတောင်သနားလာပြီ သွားလိုက်ပါဦးမယ် စင်တင်ကို သွပ်သွပ်သွပ်
ဒိုင်ကိုရော ထိုးသားကိုရော လုံးဝအားမပေးပါဘူး။ ဒိုင်လုပ်ပြီး ချမ်းသာနေသူတွေကလည်း လွယ်လွယ်ရမှန်းသိ
လို့ ကိုယ့်အားကိုယ်မကိုးဘဲ လက်ကြောမတင်းကြသူတွေမို့လို့ အထင်မကြီးပါဘူး။ ထိုးသားတွေကလည်း
မသေချာတဲ့ပိုက်ဆံကိုလောဘတက်နေကြတာမို့2နှစ်လုံးလောဘဖုံးနေကြတဲ့ စီးပွားရေးပါပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လောင်းကစားဒိုင်တွေမရှိတော့လို့ ထိုးစရာနေရာမရှိတဲ့အတွက် တနေ့လုပ်တနေ့စားတွေ ဖဲ့စုမိ
လောက်ပါတယ်။အခုတော့ ဒိုင်တွေရှိနေလို့ ထိုးတဲ့သူလည်းရှိတာပေါ့။